I-Apple ikhupha i-12.7.3 ye-iTunes eneNkxaso yePodPod | IPhone iindaba
Phantse inyanga emva kwexesha kumhla ocwangcisiweyo, U-Apple ekugqibeleni ubhengeze umhla wokuqaliswa kweKhayaPod, NgoJanuwari 26 xa kuvulwa ugcino kodwa de kube nguFebruwari 9 abasebenzisi bokuqala abayi kuba nakho ukonwabela isithethi sokuqala seApple, isithethi esingafikeleli kwintengiso ukuze sibe yenye indawo kwiAmazon Echo okanye kwiKhaya likaGoogle.
Ukongeza, iApple ikhuphe iinguqulelo zokugqibela zeebhetas ezazinokusasazwa ngaphezulu kwenyanga. Kwakhona, usebenzisa ithuba lokubhengezwa komhla wokumiliselwa kweKhayaPod, iApple isungule iTunes 12.7.3, kufuneka sifakele uhlaziyo kwisixhobo sethu ukuba sifuna ukuxhasa isithethi se-Apple, ewe okanye ewe.
Le nguqulo intsha isinika kuphela kwaye njengeyona nto iphambili Inkxaso yePodPodUkuxhaswa okwangoku asazi ukuba kuya kusebenza njani, kuba namhlanje akukho mntu uye wakwazi ukufikelela emzimbeni kweso sixhobo ukujonga ukuba luhlobo luni lokusebenzisana i-HomePod eya kuba nayo ne-iTunes. Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba ngokusungulwa kweMacOS ePhakamileyo yeSierra, iApple isuse ukufikelela kwivenkile yesicelo ye-Apple kwi-iTunes, inyanzela umsebenzisi ukuba abhenele kwi-iPhone okanye kwi-iPad ukuze akwazi ukukhangela, ukuthenga nokukhuphela usetyenziso.
Ngethamsanqa, iApple iyazi ukuba olu thintelo alunamveliso kwi iinkampani kunye namaziko emfundo asebenzisa ezabo izicelo ezingekhoyo kwiVenkile yeApp, kunye nezibonelelo zolu hlobo lweenkampani, uguqulelo lwe-iTunes 12.6.3.6, inguqulelo esivumela ukuba siqhubeke nokufikelela kwivenkile yesicelo, apho singathenga khona, sikhangele kwaye sikhuphele usetyenziso kwikhompyuter yethu, ukuze kamva sikope kwi-iPhone yethu okanye I-iPad. Le nguqulo ifumaneka ngqo kwiwebhusayithi ye-Apple ngokusebenzisa ikhonkco elandelayo. Ngelishwa, le nguqulo khange ihlaziywe inikezela ngenkxaso yePodPod, ngenxa yoko sizimisele ukuthenga esi sithethi, kuya kufuneka sikhethe phakathi kwenguqulelo enye okanye enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » I-Apple ikhupha i-12.7.3 ye-iTunes ngenkxaso yePodPod yasekhaya
I-Instagram yongeza inkxaso kwii-GIFs kwiiNdaba zayo ezidumileyo